China Cotton Plain Long Sleeve Girl T-uwe elu PY-GTC001 rụpụta na ụlọ ọrụ | Pinyan
Cotton Plain Long uwe Girl T-uwe elu PY-GTC001
owu larịị ogologo aka uwe nwanyị T-uwe elu
1.Q ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
A Ee, Anyị bụ ndị ọkachamara na - emepụta akwa ụmụaka.
2.Q you na-anabata obere iwu?
A Ee, Anyị na-anabata obere iwu na ikpe ikpe.
3. Q you nwere ike ibipụta akara ngosi anyị?
A Ee. Anyị nwere ike ibipụta ndị ahịa'logo.
4.Q Ogologo oge ole ka ngwugwu a na-ewegara m na adreesị m?
A Ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị 3-10 iji ruo adreesị gị site na DHL, UPS, EMS, 4PX. Ma ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 25-35 iji rute adreesị gị n’oké osimiri.
5.QI choro imatakwu udiri, kedu ka m ga-esi nweta katalọgụ kacha ọhụrụ maka nrụtụ aka?
A You nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na Trade Manager ma ọ bụ Email, Anyị ga-enye gị akwụkwọ akụkọ ọhụrụ anyị dịka ozi gị si dị.
6.Q Kedu ka ị si achịkwa àgwà ahụ?
A Anyị ga-ahazi nkwenye nlele tupu imepụta oke. N'oge mmepụta, anyị nwere ndị ọrụ QC ọkachamara na-achịkwa ogo na imepụta dịka ihe atụ egosipụtara. Anyị ga-ekwenye na izi ezi nke nkwakọ ngwaahịa ma zitere gị nnweta nnweta. Mmadụ Bịa ka anyị factory inyocha.
7. Q ndị ngwaahịa gị eco-enyi na enyi? Ọ dị mma maka nwa anyị?
A Ee, ngwaahịa anyị bụ eco-friendly, nwere akwụkwọ SGS. ọ dị mma ma dịkwa mma maka nwa gị.
Nke gara aga: Ndi oru ugbo olu Short aka nwa nwoke T-uwe elu PY-TD001
Osote: 8 Afọ Short Short Aka uwe Girl T-uwe elu PY-GD001
8 Afọ Short Short Aka uwe Girl T-uwe elu PY-GD001